"सोल केक" ग्लुटन मुक्त - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
ग्लुटेन-मुक्त आत्मा केक
ग्लुटेन-रहित "सोल केक" वा "आत्मा" केही रमाइलो गर्दा परम्पराहरूमा भाग लिने एक स्वादिष्ट तरिका हो। एक समृद्ध मसलादार स्वादको साथ कुकिज।
मध्य युगदेखि यो विशिष्ट हो उनीहरूलाई सबै सन्तहरू र मृतहरूको भोजको लागि बनाउन। मध्यकालीन चलन अनुसार, बच्चाहरू र गरिब व्यक्तिहरू घर-घरमा गएर मृतकहरूका लागि प्रार्थना गाउँदै वा गाउँदै गइरहेका थिए र बदलामा उनीहरूले यी कुकीजलाई केन्द्रमा क्रसले सजाएका थिए।
सत्य यो हो कि सम्हाइन, हेलोवीन र क्रिश्चियन परम्पराहरूको बारेमा थोरै पढ्दा मैले तिनीहरूको लिंक राम्ररी बुझे। खराब कुरा यो हो कि मसँग शुरू गर्न पागल इच्छा थियो परम्परागत व्यंजनहरु यद्यपि यस पटक, ग्लुटन मुक्त संस्करण तिनीहरूलाई घरमा खान सक्षम हुन।
1 ग्लुटन रहित "सोल केक"
2 के तपाइँ ग्लुटेन-मुक्त "सोल केक" बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ?
ग्लुटन रहित "सोल केक"
सम्पूर्ण चिनी को 100 g
दलियाको २ g० ग्राम (प्रमाणित ग्लूटेन-रहित)
१ चम्मच (डेजर्ट साइज) भुईको दालचिनी
१/२ चम्मच (कफी आकार) भुई अदुवा
१/२ चम्मच (कफि आकार) ग्राउन्ड जायफल
१०० ग्राम दूध वा तरकारी पेय
G० ग्राम किशमिश
हामीले दलिया र सबै मसलाहरू गिलासमा राख्यौं, त्यो दालचीनी, अदुवा, जायफल, हल्दी, मिर्च र हामी नुन थप्दछौं। हामी प्रोग्राम Seconds सेकेन्ड, गति 30 Aerate र आटा मिक्स गर्न। हामी फिर्ता र आरक्षित।
सिसा नधोई हामीले पुतली ब्लेडमा राख्यौं। गिलासमा नरम बटर र चिनी थप्नुहोस्। हामीले प्रोग्रामिंगलाई हरायौं Minutes मिनेट, गति 5/ १/२।
अर्को हामी अन्डाको भुई थप्छौं र पिट्न जारी राख्छौं Minutes मिनेट, गति 2/ १/२।
हामी पुतली हटाउँछौं, हामी प्रोग्राम गर्छौं १ मिनेट, गति 1 र जारमा पिठोको मिश्रण थप गर्नुहोस्।
समय पछि हामी दूध थप्छौं र घुमाउँदछौं १ मिनेट, स्पाइक गति।
र समाप्त गर्नका लागि, हामी किशमिश थप्छौं र फेरि घुमाउँदछौं १ मिनेट, स्पाइक गति।
हामी रोलि pin पिनको साथ आटा रोल आउट गर्दछौं जबसम्म यो or वा mm मिलिमिटर हुँदैन। हामी यसलाई बेकि paper पेपरको २ पानाहरू माझ गर्न सक्छौं।
त्यसो भए हामीले यसलाई7वा cm सेमी व्यासको गोलाकार पास्ता कटरले काट्यौं।
हामी कुकीहरूलाई ट्रेमा पास गर्छौं र हामी पातलो खम्बा वा स्प्याटुलाको किनाराको साथ एउटा क्रस बनाउँछौं।
हामीले तिनीहरूलाई १२० मिनेटका लागि १º०º मा बेक गर्दछौं। समय मोटाई र आकारमा निर्भर गर्दछ, त्यसैले किनारा कुरकुरा जस्तो देखिन्छ र सतह थोरै खैरो छ जब तिनीहरूलाई ठीक र हटाउन उत्तम छ।
ओभनबाट हटाउनुहोस् र ट्रेमा चिसो दिनुहोस्।
जब उनीहरू चिसो हुन्छन् हामी तिनीहरूलाई सेवा ट्रे वा कन्टेनरमा हस्तान्तरण गर्दछौं र तिनीहरू सेवा दिन तयार छन्।
के तपाइँ ग्लुटेन-मुक्त "सोल केक" बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ?
यद्यपि तिनीहरूको नामले "केक" भन्छन् तिनीहरू वास्तवमा कुकीहरू जस्तै छन्। वास्तवमा, तिनीहरूको आटा कुकीहरूबाट बनेको हुन्छ, तिनीहरू कुकीज जस्तै आकारका हुन्छन् र तिनीहरू कुकीजस्तै खस्ता छन्,
मैले पहिले भनेझैं मैले उनीहरूलाई बनाउने मूल विधिलाई संस्करण गरे celiac र ग्लूटेन असहिष्णु को लागी उपयुक्त। यसैले मैले ओटमीलको लागि गहुँको पीठो प्रतिस्थापन गरेको छु जसले आटालाई बढी देहदार लुक पनि दिन्छ।
यी कुकीजहरू राम्रोसँग बाहिर आउनको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि माखन र अण्डाको जुवाहरू यसमा छ कोठाको तापमान। यदि माखन चिसो छ भने तपाईं यसलाई हराउन सक्नुहुन्न। यसैले फ्रिजबाट कम्तिमा १ घन्टा पहिले यसलाई हटाउन उत्तम हुन्छ।
"आत्मा केक" तिनीहरूले दालचीनी र मसला जस्तै स्वाद, त्यसैले तिनीहरू राम्रो इन्फ्युजनको साथ चिसो दिउँसो रमाइलो गर्न आदर्श हुन् एक राम्रो ताजा कफी... तपाईं भान्सामा उनीहरूले छोडेको गन्धको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ!
आटा कुनै प्रकारको जटिलता हुँदैन। यसलाई आराम गर्न आवश्यक छैन, त्यसैले मिनेट को एक मामला मा तपाइँले कुकीहरू गर्नुभयो।
को किशमिश वैकल्पिक हो, त्यसोभए यदि तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्न, यदि तपाईं तिनीहरू घरमा हुनुहुन्न वा यदि तपाईं तिनीहरूलाई पिउन सक्नुहुन्न भने, केवल तिनीहरूलाई जोड्नुहोस्। तिनीहरू धनी र कुरकुरा जस्तो हुनेछन्।
तिनीहरू धेरै राम्ररी संरक्षित छन् प्रदान गरिएको तिनीहरू एक डिब्बा वा एउटा ढक्कनमा राखिएको छ।
महत्त्वपूर्ण: त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जसले ग्लूटेनसँगको असहिष्णुता वा एलर्जीको साथमा जईमा असहिष्णुता विकास गरेको छ र यस घटकको उपभोग गर्न सक्दैन। यदि यो तपाईंको केस हो भने, यी कुकीहरू तपाईंको लागि उपयुक्त छैनन्।
थप जानकारी -एम्पियानाडोस, डिफन्टोसबाट खास मिठो
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, हेलोवीन, पेस्ट्री
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » Celiac » ग्लुटेन-मुक्त आत्मा केक